The FIFA World Cup, World Cup uye munguva pfupi ichangopfuura World FIFA Cup chinhu dzakawanda nhabvu makwikwi inoitwa nerimwe mana makore. Makwikwi ichi, akasikwa 1928 muFrance achitungamirirwa President Jules Rimet, yakazaruka neshamwari zvose kuzivikanwa FIFA (International Federation of Association Football, muna France: Federation Internationale of Football Association). The zita mutana mukombe zvinoreva Jules Rimet. Wokutanga shanduro kwakaitika muna 1930 muUruguay, ane kusarudzwa aiva Kumukundi.
Kutsauka World Cup 1930, kuti mutambo agara yakaitwa maitikiro maviri. Takarongwa nokuda Continental confederations, World Cup qualifiers kubvumira akanakisisa zvikwata kubva mumwe kondinendi kuti ndiitewo makwikwi, zvinotora nzvimbo munyika hondo imwe kana kupfuura. The kuitika World youduku ndiyo matatu namaviri National zvikwata kwenguva inenge mwedzi.
Nyika sere chete vaitsigira nyika nhasi. The Brazil, chikwata chete kuti muchinangwa makwikwi zvose, ndiye shasha mukuru pamwe shanu okuremekedza. Ndirwowo chete zvechigarire muridzi Jules Rimet Cup (kuiswa kutamba muna 1930) uye akahwina zvakajeka nekuda nyika iyo yakahwina nokuti kechitatu ushasha, kwakaitika muna makwikwi muna 1970 pamwe Pele, chete mutambi nekatatu nyika shasha munhau . The chikwata Brazilian rinoteverwa Italy uye Germany, tichidzivirira shasha, pamwe neimwe mikombe mina. The chikwata kuti akunda yokutanga edition, Uruguay akakunda kaviri sezvo Argentina, imwe nyika yokuSouth America. Pakupedzisira, France, England uye Spain akunda World Cup neimwe. Uruguay (1930), Italy (1934), England (1966), Germany (1974), Argentina (1978) uye France (1998) akakwanisa kuwana nyaya kanenge mumwe pamba. Nepo chete nyika kuti vawane kunyika ayo Brazil muEurope muna 1958 uye Asia muna 2002, Spain mu Africa muna 2010 uye Germany muna América do Sul muna 2014. The pazviridzwa yakawanda mitambo iri World Cup vari : Germany machisa 106, Brazil pamwe 104, Italy pamwe 83, Argentina pamwe 77 uye Britain ne 62.
The World Cup ndiyo akatarisa zvemitambo chiitiko munyika, inopfuura kunyange yeOlympic. Zvoupfumi, makwikwi kunobatsira kukura zvimwe sectors uye kukura kunyika wehondo. Mitambo zvivako, kusanganisira nhandare dzinovakwa kana patsva nepatinenge. Migwagwa, dzendege, hotels uye kwezvivako zvavo, vari nani kuti chehondo makwikwi. Zvisinei, mumwe muduku dzakasimukira nyika, asi "World Wechitatu", vangatambura zvinopfuura kutarisirwa kuronga World Cup.
The World Cup ane enyika zvinhu. Sezvo zvinogona kutapurira tsika norugare uye universalism, makwikwi zvinogonawo kuva chiitiko kupararira kurwa uye mhirizhonga akapoteredza machisi, kana kunyange pave nekukurukurirana hondo pakati nyika. Pane kursy akawanda kuronga World Cup.
Chiitiko yose iri varipowo dzakakurumbira netsika, mumafirimu akawanda uye anonzi, uye ndiyo mukana kusika nziyo kana nziyo. yemavhidhiyo uye chinamirwa Albums ose footballers Somuenzaniso, zviri kutengeswa pamberi World Cup uye tanga guru mukana zvoupfumi.
1.1 Kunobva makwikwi
1.2 World First Cup (1930)
1.3 Italian Domain (1934-38)
1.4 Chidzivaidzo uye kudzoka makwikwi (1942-1950)
1.5 Chishamiso Bern (1954)
1.6 Brazil akunde (1958-62-70)
1.7 rowana anotsanangura nyika (1966-1974-1978)
1.8 Third zita Italy (1982)
1.9 Argentine rokuremekedza rematch uye West Germany (1986-1990)
1.10 kutonga rokuBrazil uye kukunda France (1994-1998-2002)
Jules Rimet akanyengetedza shamwari yenyika kusika World Cup.
Kunobva makwikwi[chinja | edit source]
Chirongwa kuronga World Cup anotanga paakasika FIFA (International Federation of Association Football) musi May 21, 1904. FIFA, nyika nhabvu muviri, rakaumbwa muna Paris, France uye makuru Zurich, Switzerland . Muna 1906, kuti kuedza rokutanga nyaya, hwakaitwa neDare Dutch mutungamiri Carl Hirschmann akanga aronga muSwitzerland, nemapoka mana zvikwata zvina sechinhu rwakapoteredza yokutanga yakanga rakatangwa. Asi panguva pakuguma okuverengwa nerusimbiso vaenzi gumi nyika, musi waAugust 31, 1905, hapana mubatanidzwa akasimbisa yavanopedza uye chirongwa panguva iyoyo yakasiyiwa. With pokugadzwa mumwe mutambo pakati Olympic nhabvu muna 1908, Hirschmann aida ndifambire mberi kuzivikanwa ino Olympic mutambo sezvo nyika ushasha kuti mudzidzi nhabvu. Pfungwa yave yakasimbiswa panguva FIFA Congress muna 1914, asi Hondo Yenyika akadzikatidza kutanga. Pashure pehondo, FIFA vakachinja mafungiro ayo. Pashure sarudzo yake seMutungamiri FIFA, yeFrench Jules Rimet akaisa zvose panzvimbo pamwe compatriot mitambo mukuru Henri Delaunay, kuti hamucharambi kuziva yeOlympic mutambo sezvo nyika ushasha kuti mudzidzi nhabvu, vachitamburira kuti pave makwikwi idzva. The Olympic Games muna 1924 uye 1928 vakakwanisa kutanga nhaurirano rinovaka pakati idzodzo weAmerica do Sul uye Europe.
The FIFA World Cup kupfimbwa akabvumirwa pane musangano muAmsterdam musi May 26, 1928, makumi maviri namashanu mavhoti nepakudiwa uye shanu pamusoro, pamwe chete abstention. The sangano rokutanga World Cup nyika yakanga zvino basa Uruguay muna FIFA Congress muBarcelona, ​​May 18, 1929, kuti vapemberere Centenary rwawo asiwo nokuti kusarudzwa akanga Olympic shasha kaviri, muna 1924 uye ra1928.
Nokufamba World Cup wakaiswa, rakatumbuka pamwe yeOlympic. Panguva pakusikwa World Cup, anenge zvose zvikwata vaiva kudzidziswa chete panguva Olympic Games uye World Cup nokuti aiva mudzidzi hweHIV. Zvisinei, makwikwi akabva ava nyanzvi. Kana mitambo yeOlympic yakanga kuti amateurs, FIFA akaziva World Cup uye akagamuchira zvikwata kuti vakasarudza professionalism. Nanhasi, nenzira, zvinangwa uye tsika akasiyana, World Cup yakazaruka nyanzvi dzose uye amateurs.  Vakawanda nhabvu vatambi munyika vane mabasa maviri. Zvakajairika kuona vatambi pokuita uyewo muuduku World Cup, sezvo pasi-20 uye pasi-17.
World First Cup (1930)[chinja | edit source]
Uruguay Champion muna 1930.
The reShanduro yeNyika Cup yokutanga yakaitwa muUruguay muna Montevideo muna 1930. zvikwata National gumi nenhatu chete vakasangana panguva iyoyo, uye nyika dzokuEurope mana chete rwizi Atlantic Ocean chikepe kukwikwidzana kuti mutambo. Belgium, France uye Romania akakwira chikepe "Conte Verde".  Yugoslavia, akavapindurawo, vakatanga pamusoro "MS Florida." Dzimwe nyika dzokuEurope akaramba kubatanidzwa mune Cup kuti zvemari uye administrative zvikonzero. Jules Rimet akanga kunyange kumanikidzwa basa tichiona France kuti vabvume kuzviremera, vatambi uye vashandirwi kuti France haana kurasa nzvimbo musangano wokutanga pose. dzimwe nyika dzose dzaiva kuAmerica. Paiva Zvikwata zviviri kubva América kuita Norte: United States uye Mexico. Vamwe vaiva South America. Zvikwata Argentina uye Uruguay, vose Undefeated, airidza yokupedzisira.  Vaviri dzakavakidzana vagara vorongerwa uye Argentines zhinji vakawanda kuona mutambo.  Zvisinei, Olympic Celeste, sezvo zvakazivikanwa Uruguayan kusarudzwa mushure nebudiriro 1924 uye 1928 Olympics, aiva amai vemba uye aiva guru zvinobatsira nokuti. Game kwakaitika musi 30 Chikunguru panguva Estadio Centenario, iyo yakavakwa nokukurumidza kunyika. Uruguay akazarura scoring, asi Argentina akaita sequentially uye scored kaviri kuti vanotungamirirawo 2-1 pakazopera wokutanga hafu.  Zvisinei, vari kumashure kuwanda, kusarudzwa weimba vakaswedera kwazvo shure nokuda yechipiri hafu uye akashandura machisi kuti 4-2, vachidikanwa wokutanga World Cup munhau. 
Italian Domain (1934-38)[chinja | edit source]
Angelo Schiavio wokupemberera World 1934 zita chinangwa nokuda chikwata nyika.
Italy vaiitawo kokutanga muna World Cup munhoroondo iri okunze zvoupfumi uye kuwedzera Fascism mu Europe. Kudzivirira shasha, Uruguay, haana mubasa makwikwi kuti vakauya pamwe chete makumi matatu namaviri marudzi, nemapfumbamwe kupfuura pakutanga shanduro. Italy Yaivawo nyika hondo mutambo. The rokutanga nguva, qualifiers vakanga chinozoiswa yokuderedza uwandu pokuita zvikwata gumi nezvitanhatu. Yakadzidziswa Murairidzi Vittorio Pozzo,  chikwata Italian vakagamuchira Artemio Franchi Stadium muna Florence, Spain ari kota finals. Pashure yakaoma vakarwa machisi, zvikwata zviviri rakasungirwa 1-1 uye aifanira kudzokorora rakatevera zuva mutambo kusarudza nzvimbo mune Semi-wokupedzisira.  The Argentine mutambi zvakajairika vokuItaly, Luis Monti, vakanga airidza chokupedzisira wokutanga World Cup kuti Argentina,  akuvara munhu Spanish mutambi panotanga mutambo. In chechipiri mutambo, Italy rakava nokuda kuhwina 1-0 chinangwa kubva Giuseppe Meazza, uye saka aizotora Austria inotevera chokutambudzika. Pamusoro Austrians, national chikwata yakahwina zvakare 1-0 uye anokwanisa chokupedzisira. Mune mamwe semifinal, Czechoslovakia yaipotsa Germany ne 3 1. World Cup yokupedzisira, Czechoslovakia akazarura scoring pamwe Antonin mukombe pamberi Benito Mussolini uye masoja mazhinji varipo panguva National Stadium yechiFascist Party muRoma.  [ 13] Asi maminitsi mashanu gare gare, Italy dzakagadzira mutambo pamwe Raimundo Orsi uye akatora mutambo mumba ovhataimu. With maminitsi mashanu kutamba iri nguva, Angelo Schiavio akakundisa 2-1 kuna vokuItaly vanotarisana Czechs pakutanga World Cup muchinangwa Europe. 
The kurongwa FIFA World Cup 1938 rwukasimbiswa France. Nyika makumi matatu nevatanhatu muchirongwa playoffs, kwete nechokuita England, Uruguay uye Spain. Wokupedzisira ambotaurwa rudzi yasakadzwa nehondo yevagari vemo. Kwokupedzisira kumativi akanga kuridzwa ne zvikwata gumi kubva Austria akabvazve kukwikwidzana nokuti maigara Germany, riri Anschluss. Saka, Sweden, izvo zvaizoita kuti kushora nyika zvaitika mberi kusvika kota finals. In rechi8 finals, Brazil uye Poland akaita mutambo nezvinangwa gumi muStrasbourg, apo chikwata yokuBrazil aida kuwedzera kuti ndiwane Poles nokuda 6-5 sezvo mutambo mumaminitsi 90 apedza 4 kusvika 4. Leonidas iye scored katatu kuti Brazil uye Ernest Wilimowski nguva mana kuPoland.  Inotevera mutambo yacho chikwata wokuBrazil, muna kota finals, akanga vanotaurwa, asi zvino mhirizhonga. Against kuCzechoslovakia, mutambo ikava hondo zvayo, izvo kwakaguma ejections matatu uye shanu vakuvara. Tiine zvibodzwa rapera 1-1, hapana kuwedzera, asi machisa wechipiri, umo Brazil vakakundwa Czechs 2-1, uye ipapo kunhonga Champions ari Semi-finals.  Italy, iyo vapota Norway uye France vaiva vaaida. Uye chizivano wake kubudirira aine kukunda kubudikidza 2-1 uye nzvimbo yokupedzisira yakanga akavimbiswa. Mune dzimwe semifinal, Hungary pakazowedzerwa kurova Sweden vanyatsoparadzwa ne 5 1. yokupedzisira yakanga zvakare vakakunda rokuItari chikwata, izvo vanorova Hungarians kubudikidza 4-2, nebasa guru Silvio Piola uye Gino Colaussi kuti vanozvisanangurira mumwe chibooreso.   The chikwata Vittorio Pozzo aiva wokutanga kuhwina makwikwi kaviri pamusara.
Chidzivaidzo uye kudzoka makwikwi (1942-1950)[chinja | edit source]
Muna 1939, ivo nemisanganiswa Germany, Brazil uye Argentina kunge aida chehondo World Cup 1942. The FIFA President Jules Rimet French, akaenda South America kuongorora Brazil uye Argentina zvirongwa. Paakanga ari Rio de Janeiro, mauto eGermany vakarwisa Poland musi waSeptember 1, 1939, uye Second World War akatanga. Gadziriro World Cup vakanga kuvhiringidzwa pamberi kusarudza wehondo rudzi. Nokuda Hondo Yenyika II, hapana World muna 1942 uye 1946
Uruguay Champion muna 1950
In Congress paguta Luxembourg musi July 25, 1946, kwakasarudzwa kuti World wechina Cup muna 1950 raizoitwa muBrazil. Kokutanga ari makwikwi nhoroondo, England akatora mugove qualifiers, apo nyika makumi matatu vaikwikwidzana. Ukuwo, National zvikwata zvakawanda haana kuitawo World Cup pashure pehondo inaugural, akadai Austria, Belgium, Argentina, Peru uye Ecuador, uyo akadonha kubva kuridza qualifiers. Pana Maracanã Stadium, yakavakwa kuti chiitiko, 150,000 vaoni vakaungana kuona inokosha boka mutambo 1 pakati peBrazil Yugoslavia. Aine kukunda kubudikidza 2-0, wokuBrazil National chikwata rave kukwanisa nokuda finals. Mumapoka 2, 3 uye 4, vakanga Classified Spain, Sweden neUruguay, ukuwo. Uruguay akashandisa imwe 8-0 achikurovai muBolivia, ndiyo huru kupfuura World Cup 1950 uye mumwe kupfuura vose Tournaments. This World Cup chete vakanga vasina kwokupedzisira. Mumakore chokutambudzika, vakaita musoro Brazil, Spain, Sweden neUruguay, uyo akakunda boka ravo rokutanga chokutambudzika. Brazilians vakatanga chokupedzisira chokutambudzika zvakanaka, goleando Sweden ne 7-1 uye Spain nokuda 6 1. mupikisi ake okupedzisira aiva Uruguay, iyo yakanga yakasungirirwa pamwe Spain uye Sweden akunda. Zvikwata zviviri kuridzwa panguva Maracana musi July 16, 1950, zvichienzaniswa vanenge 200,000 vanhu. Brazil aida chete SWEDERA, apo Uruguay aifanira kukunda riziviswe Kumukundi ari makwikwi. The Zimbabwean kudzivirira akabata kurwisa yokuBrazil akanga scored gumi zvinangwa zviri ndechekuti uye mamakisi akava 0-0 rokutanga hafu. Mukutanga wechipiri nguva, Brazil scored pamwe Friaça. Mushure maminitsi 21, Juan Alberto Schiaffino equalized kuti Uruguay uye 34, Alcides Ghiggia akatendeuka mutambo nokuda Celeste. Brazil zvaraswa World Cup pamba guru mwoyo munhoroondo nhabvu wokuBrazil. The Zimbabwean chikwata yaiva nyika shasha kechipiri.
Chishamiso Bern (1954)[chinja | edit source]
Statue vatambi shanu akaberekerwa Kaiserslautern mudunhu vaitsigira pamwe West Germany muna 1954.
The 1954 reShanduro yeNyika yakaitwa kuSwitzerland. The chikwata Hungary aiva kufarira ari mutambo. Anonziwo The Golden Time, kusarudza enchanted nyika nhabvu pamwe tarenda ake uye akasimbisa vavo kufarira chinzvimbo kuti mutambo wenyika makwikwi okutanga, kurova South Korea kubudikidza 9-0 uye West Germany ne 8 kusvika 3. Pasinei munhau kukundwa, dzekumadokero vokuGermany akapfuura danho. Also kukwanisa nokuti kota finals Brazil, Uruguay, England, Yugoslavia, Austria uye Switzerland. Uruguay, vakundi, yaipotsa England kubudikidza 4-2 uye kusvika semifinal muHungary, sezvo Hungarians yakahwina Brazil, uyewo 4-2, pane mutambo yakaguma kudzingwa matatu.   Kumwewo, West Germany vakarova Yugoslavia kubudikidza 2-0 uye Austria kupera Switzerland, vemba, nokuti 7-5 pashure pokuva pokurasikirwa 3 kusvika 0. Munguva semifinals, West Germany yakakunda Austria vanyatsoparadzwa ne 6-1 uye Hungary, mumwe kufarira ari makwikwi, kupera Uruguay, tichidzivirira shasha, kubudikidza 4-2 mu nguva, sezvo mutambo pamusoro maminitsi 90 akanga achangobva 2 kusvika 2.  Chisarudzo wakauya pamusoro July 4, 1954, muBern. Hungary uye West Germany reissued game akaita pakutanga chokutambudzika, pamwe nevakawanda kufarira Hungary, sezvo akanga ava namakore 4 pasina kurasikirwa machisa. The Golden Time akatanga wokupedzisira sensationally, pamwe Ferenc Puskás uye Zoltán Czibor rotanga scoring pa 6 8 uye maminitsi wokutanga hafu, ukuwo. It aitarisirwa imwe vanyatsoparadzwa National chikwata Hungarian, asi West Germany akabva angopindura pamwe Max Morlock uye Helmut Rahn kusvika 10 pashure maminitsi 18, dzokubatanidza mutambo achiri kutanga danho. Mune hotly akapikisana kechipiri, Helmut Rahn scored kuramba chinangwa nokuda West vokuGermany, uyo akakunda wokupedzisira kubudikidza 3-2, mune mutambo akazozivikanwa sezvo Chishamiso Berna.  The makwikwi waiva ubudirire, nehama dzinokwana 943.000 vaoni takatarisa mutambo kubva pacho. In zvemitambo nemashoko, pachiyero akanga akanaka chaizvo, imwe tsamwisa chaizvo World Cup, pamwe neavhareji 5.4 nezvinangwa por mutambo.
Brazil akunde (1958-62-70)[chinja | edit source]
Kubva kuruboshwe kuenda kurudyi: Djalma Santos, Pele uye Gilmar pashure musoro Brazil muna 1958 World Cup.
Wechitanhatu reShanduro yeNyika Cup muna 1958 yaiva Sweden. The Soviet Union chavapo wokutanga makwikwi. Ridhindwe aizivikanwa kukundikana Italy uye Uruguay, yose maviri-nguva vakundi vakakundikana ukwanise kuita mutambo. Usingafungiri, chikwata kweFrance kushamiswa dzake kunogumbura mutambo.  Kufambira mberi French vatambi akamira ari semifinals, apo Brazil varohwe ne 5-2 nekuvongwa zvinangwa zvitatu kubva Pele vaduku, makore 17 chete.  Mune dzimwe semifinal, Sweden, pamba, vanokwanisa chokupedzisira kuburikidza kunokunda vakundi, West Germany. Mumazuva okupedzisira enyika makwikwi, Brazil akarasikirwa mumba varidzi, asi yakahwina 5-2 nezvinangwa zviviri kubva Pele, Vava maviri uye Zagallo.  With gumi zvinangwa, kuti wokuFrance Just Fontaine aiva pamusoro scorer the World Cup, nezvinangwa kaviri sezvo vazhinji Pele uye West German Helmut Rahn, uyo scored zvinangwa matanhatu nerimwe. 
Makore mana gare gare, World Cup akadzokera América kuita Sul, zvino Chile.  Makumi mashanu nevatanhatu nyika muchirongwa qualifiers. France, mumwe semifinalist iri rapera, akatadza ukwanise.  Pakave akurumidze kukura chomutambo kuti zvikuru kuzvidzivirira maitiro. Brazil, kudzivirira shasha, akauya okupedzisira ose wokutanga kutotanga kudiwa kanenge imwe chekucheresa Spain ukwanise.  The chikwata Brazilian haana Pele, kurwadziwa (mushure mutsaona mutambo kuzorwa kuCzechoslovakia, asingadi kuita zvakawanda shanduro iyi Cup, kunyange Brazil achitamba mitambo mitatu),  uye Spanish pamwe Alfredo Di Stefano zvakare vakuvara (akamuka kurwadzisa Chile uye vakaramba chete kuridza ezvinhu kubva wechipiri pachikuva, asi Spain akanga yakapedza uye nyeredzi kumbobvira vakaridza bhora World Cup).  Spain aifanira kukunda kuti ukodzere uye pashure kuita 1-0 Adelardo,  kuti muzvinapembe akatadza zvibodzwa chirango kuna La Furia  uye dzikundikane munhu chepamutemo chinangwa bhasikoro kava kubva Joaquín Peiró, kunokuvadza furuwenza. [42 ] Zvichitevera mutambo, Brazil vakarova Spain agumbuka nokuda 2-1, nezvinangwa zviviri kubva Amarildo, Pele chinotsiva.  The Chilean National chikwata achiwana panzvimbo iri semifinals mushure mekushandisa Soviet Union muna kota finals. Asi semifinals, Chile yaisakwana Brazil, zvaakatadzisa 4-2 pahondo nyika, nezvinangwa zviviri kubva Garrincha uye Vava. Mune mamwe semifinal, Czechoslovakia Josef Masopust akakunda Yugoslavia 3 1. In mutongo, wokuBrazil akadzokera kutarisana Czechs, apo wokutanga Danho game vapedza asungwe 0 kusvika 0. Asi yokupedzisira, pasinei Czechoslovakia akazarura scoring pamwe Masopust, Brazil akakunda 3-1 agumbuka nezvinangwa kubva Amarildo, Zito uye Vava. 
WokuBrazil chikwata shasha muna 1970.
Pashure mukukunda England kumba 1966, repfumbamwe FIFA World Cup yakaitwa Mexico muna 1970. A nhamba rekodhi nyika makumi muchirongwa qualifiers  International se Portugal, Hungary, France, Spain uye Argentina haana kukodzera kuti nyaya. Ukuwo, Israeri uye Morocco kupindira kekutanga World Cup Cite error: The opening <ref> tag is malformed or has a bad name The nebope pakati West Germany uye England ari quarterfinals akanga 2-0 nokuti Chirungu zvisipo maminitsi pfuurei 20 kupedza mutambo. Asi West vokuGermany pota vakakunda 3-2 muna chiwedzerwa pashure kusungira mutambo mumaminitsi 90. Munguva semifinals, kuMavirira German chikwata akatarisana Italy mu Azteca Stadium, akavaka kunyanya nokuda World Cup. Italy akakunda mutambo 4-3 mu nguva, mushure mutambo apedza 1-1 chaiye nguva. The West German Franz Beckenbauer akaramba achitamba ruoko ari chipfuramabwe nokuti pane clavicle kukuvara. Mune dzimwe semifinal, kuti Brazil kurova Uruguay nokuda 3-1 kugumbuka. Apo Uruguay akanga achiteverwa nevanhu 1-0, iri Brazilian Pele akapa pamusoro mutambi Dagoberto Fontes kugokora (vakanga vafamba rake ruoko pakutanga game), asi mutongi rakachinja kushaya, zvichiratidza munhu hazvimo mhosva Sources  On mukuru mugumo rokuItari vatambi havana kubata kurwisa Brazilian uye vakarasika kuti vanyatsoparadzwa, kubudikidza 4 1.  With zvinangwa 10, kuWest Germany Anouraya Gerd Müller aiva pamusoro scorer. In ichi World Cup, Pele akaratidza kamwe zvakare ake tarenda ane kuedza kuita chinangwa 50 metres kubva Vatambi ravane Uruguay kana Ladislao Mazurkiewicz. Akakunda ake wechitatu World Cup, achiva chete mutambi kuti vabudirire Feat yakadaro. Brazil zvakare akahwina ake rwechitatu rokuremekedza uye nokudaro akawana kodzero kuramba Jules Rimet Cup zvachose.
rowana anotsanangura nyika (1966-1974-1978)[chinja | edit source]
Statue vakundi vatambi mana England mu 1966 World.
The North Korea yaiva kushamiswa kwakaitwa World Cup 1966, vachitora nzvimbo England. The chikwata Asian kurova Italy muboka Danho ukwanise kuita quarterfinals. Vakakurumidza akatonga Portugal Panguva iyi, zvichiita 3 kusvika 0. Zvisinei, maitiro Portuguese Akatoshamisika uye dzakaguma mukuwana mutambo kubudikidza 5-3 nezvinangwa ina kubva Eusebius. Pamba, England chikwata yaingoda, kutanga nokuti vakapata ose mutambo ari Wembley Stadium uye nekuti kuyananisa zvakanga zvakanaka. Munguva quarterfinals, kuti Mukuru uye Argentina, Antonio Rattín akanga risingabatanidzwi mutambo maminitsi 35 kupinda mutambo pamusoro wehondo, achisiya wake chikwata gumi pamusoro gumi, Cite error: The opening <ref> tag is malformed or has a bad name izvo dzakaguma kuyerwa, sezvo England chikwata varohwe 1 kusvika 0. Mumazuva Semi okupedzisira, England akakunda Portugal (yakanga Kwakabvisa Brazil, tichidzivirira shasha, rokutanga chokutambudzika) ne 2-1 nekuvongwa zvinangwa zviviri kubva Bobby Charlton. Mune dzimwe semifinal, kuti West Germany kurova Soviet Union ne 2 1. At pamugumo mutambo, England akaramba kuenda West Germany. Mushure 2-2 anokweva dzose nguva, pamwe West vokuGermany vakakwanisa chinangwa yapera kuti kutamba, mutambo akaenda chiwedzerwa. Geoff Hurst, vakanga scored chinangwa, akaita maviri (wokutanga pamutemo, sezvo bhora haana kupfuura chinangwa mutsetse) , vakanochengeta kuhwina 4-2 kuna Chirungu. England yakahwina rokutanga uye chete World Cup.
Pashure pokukunda of Brazil mu 1970, kuti makwikwi kwaiva gadzai makore mana gare gare, nyika West Germany. The Haiti zvakashamisa qualifiers kuti akodzere, vachisiya | uye [[Mexican Selection [[United States vanhu National chenhabvu United] States] Football | Mexico]] (yakanga vaipinda rapfuura World Cup) kubva makwikwi. The 1974 World Cup ndiyewo debut iri Australia ari makwikwi. In wokutanga chokutambudzika, kuti East Germany kushamiswa mukuwana West Germany By 1-0, pamwe chinangwa Jürgen Sparwasser apo vaviri zvikwata zvina dzakaumbwa, pamwe maviri rokutanga nomumwe kiyi mapoka mana okutanga pechikuva. In wechipiri chokutambudzika, kuti Netherlands akatonga boka ravo uye zvachose pakudzivirira vakundi, Brazil, apo West Germany vakarova Poland ne 1-0 mumunda zvikazara kuhwina nzvimbo kutarisana kuNetherlands ari wokupedzisira. The Dutch, akatungamirirwa Johan Cruijff, akatanga akanaka nhabvu iyo enchanted nyika, anozivikanwa nhasi sezvo Dutch carousel . Zvisinei, muna chokupedzisira mutambo, muridzi wemba, West Germany akakunda 2-1 akagumbuka pamusoro simba kusarudzwa Netherlands. Pasinei pokukundwa chikwata kwake kwokupedzisira, Cruyff akanzi yakanakisisa mutambi ari 1974 World Cup.
Argentina vaipinda ari FIFA World Cup 1978. The qualifiers zvakaoma chaizvo, nokuti vakanga zvigaro 14 chete zvikwata 97 kuti vaikwikwidzana. The Cup akanga Virtual zvakanyanya. West Germany, vachidzivirira shasha uye Argentine National chikwata, hondo, akanga atova yakasimbiswa nzvimbo. zvikwata simba kufanana kuUruguay, England, Soviet Union uye Yugoslavia vakanga vasara kubva mutambo. Ukuwo, Iran uye Tunisia akaita debut dzavo makwikwi. The World muna 1978 aiva chete rapfuura format, yakaitirwa West Germany. The Netherlands yave enchanted nyika zvakare uye anokwanisa chokupedzisira kuti kutanga akaisa muboka rako rechipiri chokutambudzika. Mune rimwe boka, Argentina vakarova Peru ari kufungira mutambo apo Argentines vaifanira kukunda kubudikidza zvinangwa zvina kuti vakwanise kusvika kwokupedzisira, asi akaita 6-0,  kusiya Brazil kubuda hwokupedzisira pasi chinangwa musiyano.  Pakupedzisira, Mario Kempes aitungamirira chete pamberi yokuzorora. The Netherlands vakatonga Danho rechipiri uye Dick Nanninga equalized zvisipo maminitsi masere kuti agumise mutambo.  Nezvishoma Dutch kusarudza asina kuona, bhora kurova rakachinjika racho rakati pakupera mumutambo. The mutambo yakapera 1-1 uye shasha aifanira rinorondedzerwa ovhataimu. Nokufamba imwe nguva, Kempes zvakare uye Daniel Bertoni, akazodza kukunda Argentine chikwata,  uyo akakunda World Cup kokutanga.   The Netherlands varasikirwa chokupedzisira World Cup wechipiri uye ipapo Kaviri kugara naHama pazviridzwa.
Third zita Italy (1982)[chinja | edit source]
Italian pamwe ndege World Cup Trophy pashure musoro 1982.
Wegumi World Cup kwakaitika Spain, muna 1982 uye kwenguva yokutanga, 24 zvikwata mubasa makwikwi. The chikwata Netherlands finalists kubva rapfuura edition, haana vakapfuura qualifiers uye vakagara kubva mutambo. Yokutanga danho aizivikanwa enhoroondo kukunda pamusoro Hungary pamusoro El Salvador, kubudikidza 10 1. Cite error: The opening <ref> tag is malformed or has a bad name rokutanga kutotanga uyewo kupatsanura mashoko vakamira panze national chikwata, richiswedera zvose zvayo wazvipira. In chechipiri chokutambudzika, vakanga Classified Poland, West Germany, Italy uye France kuna semifinals, pamwe magetsi Champion Argentina, chapedzwa. In wokutanga Semi wokupedzisira kwePoland pasina Zbigniew Boniek, avo rwoga playmaker, vakarasikirwa kuna Italy zvinangwa zviviri Paolo Rossi. Mumwe mutambo pakati France uye West Germany ndokuguma ari SWEDERA kubudikidza 1-1, pachena ne mutongo zvechisimba dzisina kunyorwa zita kubudikidza muzvinapembe,  ari Vatambi West German Harald Schumacher mu French Patrick Battiston, uyo akatambura [[chipaparadzungu uye akarasikirwa zviviri zino va  With chisungo , mutambo vakapinda nguva, iyewo rakava akaenzana pamwe French achiuya kuvhura 3-1 asi kubvumira maitiro West vokuGermany, uyo akakwanisa kuvhuna kunyange. Mushure remakuwerere 3-3, mutambo raifanira akasarudza ari mutongo shootout, apo West Germany vakakunda 5 kusvika 4.   The yokupedzisira, muchinangwa Madrid, akanga Italy sezvo vakundi nyore pane kutarisirwa. Vakazarura 3-0 pamusoro West vokuGermany, uyo cashed pamwe Paul Breitner. Paolo Rossi kwete chete akahwina musoro wake selection, asi aivawo pamusoro scorer uye zita mutambi ari mutambo.
Argentine rokuremekedza rematch uye West Germany (1986-1990)[chinja | edit source]
Pakutanga akafanoona mu Colombia, iyo 1986 reShanduro yeNyika Cup zvinoitika Mexico zvakare. Sezvo makore mana apfuura, France yakakundwa ari semifinals ari makwikwi ne West Germany. The French akapedza mutambo yetatu pashure kurova Brazil. Mune quarterfinals ari machisi kuti kwakasarudzwa negakava kuti mutongo va  The makwikwi pakataurwa Kusangana pakati Argentina uye England ari quarterfinals, apo mukuru Argentine Diego Maradona scored kuva nechinangwa ruoko. maminitsi mana mushure chinangwa, gare gare chakazonzi the Mano de Dios ,  Maradona dribbled vatambi matanhatu Chirungu uye vatambi Peter Shilton unotara ane chinangwa anthological, iyo pakupedzisira akasarudzwa sezvo chinangwa remakore.  ari semifinal, ari Argentine playmaker scored maviri kukunda wake kusarudzwa kuzorwa Belgium ne 2 kusvika 0. mu add dzi, Argentina yakahwina reShanduro yeNyika Cup yechipiri muMexico pamwe Jorge Burruchaga wokupemberera 43 kechipiri pamusoro West Germany, kuona kukunda kubudikidza 3 2.  Diego Maradona akanga zvokusarudzwa mutambi ari makwikwi, ukuwo Chirungu Gary Lineker aiva scorer.
The 1990 World Cup akanga muchinangwa Italy kechipiri. Kudzivirira shasha Argentina vairidza machisi rokutanga pamusoro Cameroon. Mukukunda Cameroon aiva kushamiswa kwakaitwa mutambo wekutanga. Cameroon, Sezvineiwo, vakava rudzi wokutanga African ukwanise kuita quarterfinals ari makwikwi, achirova Colombia yechipiri yakapoteredza, vachidikanwa mutambo ne 2 1 ari uyewo, nezvinangwa zviviri kubva Roger mi, akanga 38 panguva iyoyo. Kusarudzwa Cameroon vakakanda kuti uyewo vakaenzana akaenzana England, uye pashure kuswedera pedyo 2-2 chaiye nguva yakanga zvachose makwikwi pashure kutambura chinangwa Chirungu wechitatu nguva / imwe nguva. The ipapo shasha Argentina akatarisana chikwata National Naples kutamba, guta kwaaigara Maradona, sezvo waitsigira tsvimbo dzemo kwayakanga chidhori, Napoli .  The vokuItaly akazarura scoring pamwe Salvatore Schillaci. Claudio Caniggia akasungirirwa Argentines uye mutambo vakapinda nguva, izvo vakaramba chisungo 1-1 uye ruvara rokupedzisira yakanga kuridzwa Zvirango. The Vatambi Argentine Sergio Goycochea raiva zita guru raJehovha makwikwi, tichidzivirira madzoro Roberto Donadoni uye Aldo Serena. The Argentines yakahwina 4-3 ne mutongo shootout. The semifinal yechipiri yakanga akasarudzawo pamusoro Zvirango. West Germany uye England rakasungirwa 1-1 chaiye nguva uye nguva hapana akawana mambure. Stuart Pearce uye Chris Waddle vakarasikirwa kuunganidza dzavo uye West vokuGermany vakaswedera okupedzisira. Pakupedzisira, Argentine vatambi vaviri vakadzingwa uye West Germany akahwina 1-0 chirango chinangwa Andreas Brehme, pamwe maminitsi mashanu kusvika kumagumo mutambo. Mushure West vokuGermany akarasikirwa vaviri yakarurama ndechekuti, Lothar Matthäus akamutsa Trophy World Cup uye ivo akakunda zvavo wechitatu rokuremekedza. Cite error: The opening <ref> tag is malformed or has a bad name
kutonga rokuBrazil uye kukunda France (1994-1998-2002)[chinja | edit source]
Mushure wakanaka mabasa Cameroon iri pakadhindwa 1990, FIFA vakasarudza kupa sefungu rechitatu kondinendi yose Africa. The World Cup 1994 kwakaitika [[United] States]. nyika 147 muchirongwa qualifiers. Uruguay, England, Portugal, France uye Denmark, vaitsigira European Championship, vakanga vasara kubva makwikwi. Kutanga World Cup aizivikanwa yakanaka kwakaguma Anti-doping Diego Maradona, ndikarohwa kushandisa [zvinodhaka]  s. The American vakasarudzwa, World Cup hondo, akanga abvisa yechipiri kumativi ne Brazil. Brazilians vari makwikwi ichiri kurova Netherlands uye Sweden, mumwe zvinoshamisa zviri mutambo. Uyewo munhu Semi-finalist muna 1994 World Cup, kuti Bulgaria aiva mumwe kukatyamadzwa  ari Bulgarian chikwata, Hristo Stoichkov, akanga abvisa panyika semifinals pedyo Italy, izvo wokutanga chokutambudzika, vanokwanisa chete sezvo wechitatu yakanakisisa wokupedzisira vanokwanisa pashure kukundwa pamusoro Ireland iri mutambo yokutanga. The yokupedzisira akabva vachitamba pakati peBrazil Italy mu Rose Bowl mu Los Angeles, California. Kusiyana nevamwe makwikwi, zvikuru kurwisa, avhareji 2.7 zvinangwa por yemhuka, Cite error: The opening <ref> tag is malformed or has a bad name chisarudzo yakavharwa, kuzvidzivirira chaizvo. Panoperera nomurau nguva mugumisiro rapera 0-0, izvo haana kuchinja mu ovhataimu. <NeMuridzi zita = "L'ÉquipeCopa1994"> L'Equipe, 50 yatiri of mutambo, numéro. cit. "", p. 655, "Le Brésil à l'arraché» Patrick Urbini </ ref> Zvakange wokutanga Cup wokupedzisira kuti akasarudza Zvirango. <NeMuridzi zita = "L'ÉquipeCopa1994" /> vateresi maviri okutanga zvainyepa asi vaiva kukundikana kuti vokuItaly. Daniele Massaro uye Roberto Baggio kusarudza kuti Brazil kuhwina zvavo wechina ushasha nyika Cite error: The opening <ref> tag is malformed or has a bad name iri mumagazini ino, Romario yakanga chikuru mutambi ari chikwata yokuBrazil uye akavhotera zvakanakisisa mutambo.
The World Cup 1998 wechipiri kuti dzakamhanya-mhanya munzvimbo France mushure 1938. Zvakanyorwa qualifiers rova ​​rekodhi, pamwe kusangana munyika 174 dzakanyorwa. Nokuti kokutanga FIFA World Cup yaisanganisira 32 zvikwata. Pakudzivirira Champions, Brazil zvakare kusvika chokupedzisira World Cup kuburikidza achirova Netherlands iri mutongo shootout ari semifinals. Mushure Unobata matatu kubva mumitambo nhatu Group C, France yapa pamusoro Paraguay mu neLens ane chinangwa goridhe kuti Laurent Blanc  Mune quarterfinals, kuti Blue Kwakabvisa mumhanyi-up Italy kuitika  Pakupedzisira, French haana mukana Brazil nezvinangwa zviviri kubva Zinédine Zidane uye Emmanuel Petit, thrashed kuti Brazilians 3-0 mu Stade de France  Iyi yaiva nguva wechitanhatu chiitiko yakanga vakakunda hondo rudzi. The vavashungurudza Brazil eiro Ronaldo, 21, akanga zvokusarudzwa mutambi ari mutambo.
Yakarongwa Japan uye South Korea, ya2002 World Cup aiva pakadhindwa rokutanga mutambo kuitika Asia uye ane nyika mbiri hondo. Nyika akaona Brazil kuhwina wechishanu nguva makwikwi, vachidikanwa pentacampeonato. The anokumhan'arira of Brazilians mune rokupedzisira aiva Germany, uya akakunda South Korea chikwata ari semifinals. Ronaldo, atova kusarudza ari semifinal kuzorwa Turkey, scored kaviri yokupedzisira, chete zvinangwa maviri mutambo. Apedza sezvo pamusoro scorer nezvinangwa sere, asi Vatambi German Oliver Kahn akanga zvokusarudzwa yakanakisisa mutambi the World Cup. South Korea, mumwe wehondo kunyika, inotungamirwa Dutch murairidzi Guus Hiddink, aiva kushamisika kwakaita nyaya. Shure kwokurohwa Portugal vari boka pachikuva, vakarova Italy rechipiri yakapoteredza aine chinangwa yendarama kubva Ahn Jung-Hwan uye vakabatsirwa kuyananisa, izvo akapidigura zvinangwa dzose mbiri, uyewo zvachose Spain ari quarterfinals pamusoro chirango shootout. France, tichidzivirira shasha, akanga pa rwakapoteredza iri mutambo wekutanga asina chinangwa, rimwe boka apo vakundi nyika mbiri dzakanga kupera, sezvo kuUruguay, yakanga iri boka iri, uyewo akapedzisira kusiya World Cup rokutanga chokutambudzika. Argentina, imwe nyika shasha selection, akanga pa muboka pachikuva, akabatana France sezvo mwoyo zvikuru wokutanga World Cup of XXI remakore.
↑ "Archive copy". Archived from the original on 2016-03-26. Retrieved 2017-06-29.
↑ "Archive copy". Archived from the original on 2014-02-22. Retrieved 2017-06-29.
↑ RSSSF.com: Vital Statistics of the Rio de Janeiro State Main Football Clubs (Arquivo)
↑ fifa.com :. /worldcup/archive/edition=32/overview.html Brazil enchants uye anokunda saith (worldcup / Archive / yakabudiswa = 32 / overview.html & title = Le% 20Mexique% 20sous% 20LE% 20charme% 20des% 20Br% C3% A9siliens faira)
↑ L'Equipe, 50 yatiri of mutambo, numéro. cit. "", p. 339 'Itália, Allemagne »Jacques Étienne
↑ observatoriodaimprensa.com.br :. nhau yemitambo haana ndangariro (faira)
↑ L'Equipe, 50 yatiri of mutambo, numéro. cit. "", p. 337 'Le verrou italia Kutyoka »Robert Vergne
↑ Dave Appadoo uye Laurent Campistron, "Pele muna 1970, le cerveau 'France Football' ', No. 3347, June 1, 2010, p. 60
↑ Etienne Labrunie, La fabuleuse Histoire the coupe Du Monde , Timee-maBhaibheri , September 22, 2005, 141 p. (ISBN 2-915586-38-1), p. 30 uye 31, "La LÍNEA the nazvo"
↑ euronews.com: 'RFA 1974' ' (faira) Pasinei kukundwa, West Germany kukwanisa yechipiri kumativi, mapoka http://fr.euronews.net/world-cup-nation/historique/1974/&title=RFA%201974
↑ L'Equipe, 50 yatiri of mutambo, numéro. cit. "", p. 385, "Et Müller châtié the Hollande" pakati Jean-Philippe Réthacker
↑ fifa.com: http://pt.fifa.com/worldcup/archive/edition=50/preliminaries/index.html
↑ talksport.co.uk: Criminal Unobata: Arsenal, Liverpool, Man United uye zvakawanda ' ' (-more-faira 195 237)
↑ super.abril.com.br :. chii-vaiva-akaipisisa zvikanganiso arbitrage-nyaya-mwoyo-443235.shtml Chii vaiva yakaipisisa refereeing zvikanganiso munhoroondo mwoyo? ([http: //archive.wik iwix.com/cache/?url=http://super.abril.com.br/esporte/quais-foram-piores-erros-arbitragem-historia-copas-443235.shtml faira])
↑ L'intégrale de l'Equipe de France of nhabvu, 1904 -1998, numéro. cit. "", p. 274
↑ L'Equipe, 50 yatiri of mutambo, numéro. cit. "", p. 483, "Si pres Du paradis" Gérard Ernault
↑ L'Equipe, 50 yatiri of mutambo, numéro. cit., p. 486 , 'Le Triomphant Calcio »Jacques Ferran
↑ ' 'L'Equipe, 50 mhete mutambo, numéro. cit. "", p. 487, «Le rachat of Rossi 'Victor Sinet
↑ L ' chikwata mutambo zvindori 50, p. cit. "", p. 536, "Foot of bonheur! 'Of Gérard Ejnès
↑ laprensa.hn: Ediciones / 2010/06/05 / News / Lo-chitsamba-Un-poco-game-la-the mano-de-Dios-Maradona ' "Lo katsamba Un poco with käsi de Dios": Maradona' ' ([http: : //archive.wikiwix.com/cache/ url = http: //archivo.laprensa.hn/Deportes/Ediciones/2010/06/05/Noticias/Lo-anote-un-poco-con-la-mano- de-Dios-Maradona faira])
↑ fifa.com: ari "Chinangwa Remakore" makore 25 akapfuura ([http: //archive.wikiwix .com / cache / url = http: //pt.fifa.com/worldfootball/news/newsid=1457201.html faira])
↑ L'Equipe, 50 wevaSidhoni kuti mutambo, numéro. cit. "", p. 535, "Le ndinoiitawo haut Tango» Gérard Ernault
↑ Vittorio Dini, "Maradona, napolitain heros Actes the Recherche in sayenzi sociales , No. 103, 1994, p. 75-78
↑ L 'chikwata mutambo zvindori 50, p. cit. "", p. 593, "RFA: Un Triple atendu» Victor Sinet
↑ eurosport.fr: coupe Du Monde / 2010 / Retro-le-mondial-1994_sto887613 / story.shtml Retro Le mondial 1994 (coupe-du-monde.tf1.fr/actu-coupe-du-monde/le-mondial-1994-5868111.html&title=R%C3%A9tro%C2%A0%3A%20Le%20Mondial%201994 faira)
↑ Dominique Grimault, Les Bleus:. Le livre officiel de l'Equipe de France Paris, Solar , 1998. (ISBN 978-2-263-02819-9), p. 128 129, "Laurent Blanc: Seule the Victoire Est Jolie"
↑ Les Bleus: Le livre officiel of l ' Equipe de France, numéro. cit. "", p. 130 uye 131, "L'Itália kuti leur botte: the Squadra ndiye Française! »</ NeMuridzi> uye semifinals, kushamiswa kwakaitwa mutambo, asi Croatia, zvebhinya Davor Šuker Cup scorer nezvinangwa nhanhatu <ref> Les Bleus :. Le livre officiel de l'Equipe de France, numéro. cit. "", p. 132 133, "Thuram:" On Est in kuguma »»
↑ Les Bleus :. Le livre officiel de l'Equipe de France, numéro. cit. "", p. 134 135, "Zidane, l'Arc de Triomphe"
↑ "Archive copy". Archived from the original on 2013-11-03. Retrieved 2017-06-29.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=FIFA_World_Cup&oldid=91550"
This page was last edited on 23 Kukadzi 2022, at 07:22.